Vhiki 7, Bug Yemahara, uye Yakabudirira Software Kuburitsa | Martech Zone
Vhiki 7, Bug Yemahara, uye Yakabudirira Software Kuburitswa
Chipiri, Gunyana 9, 2007 China, June 11, 2009 Douglas Karr
Iri svondo rechinomwe pane rangu basa nyowani uye ranga riri svondo risingafadzi rekupemberera. Yedu Kuronga Pamhepo iri kuzvitsauranisa pachayo kubva kuchaunga chemakwikwi kunze uko uye kuchizviita nekukurumidza. Svondo rinouya tiri kubhururuka kuenda kuTampa kunotaura neimwe franchise yeresitorendi, imwe yeakakura kwazvo munyika.
Chii chiri kukwezva vatengi ava chiri nyore. Isu tinowana odha kuresitorendi. Ndozvazviri zvese nezve, handiti? Paunoraira online, unotarisira kugamuchira chigadzirwa - nekukurumidza uye nenzira kwayo. Mimwe yemakwikwi anozvibata ivo neyakajeka kumberi-kumagumo uye kusabatana-kwakakosha kusangana. Kunyangwe vaitaridzika kunge vakanaka, ivo havasi kuwana odha kuresitorendi. Kana iwe usingakwanise kupa iyo chaiyo odha, pa-nguva, uye uve nechokwadi chekuti yakagadzira… saka unofanirwa kungobuda mubhizinesi.
Kune mamwe makambani e'kubhururuka-nehusiku 'akavaka garaji mhinduro pano neapo, uye kune mamwe makambani kunze uko ane mazano akanaka asi haagone kuvasvitsa nekuti havana tarenda kana hutungamiriri. Ini ndakapinda kambani ine yakanakisa yezvakanakisa. Tine tarenda rinosvika kure remaindasitiri, vagadziri vanoshamisa uye vanogadzira, uye kunyanya kune zvese chishuwo chekuzviisa pamwe chete.
Kutanga, Patronpath vakaita sarudzo dzakajeka dzekudyara zvakanyanya muvanhu vane tarenda, mhinduro yakasimba, uye vakabva vatanga kushanda paindasitiri. Chiri kutanga kubhadhara. Iyo yekuvakisa kuseri kwePoint-ye-Yake yekubatanidza ndeye mameseji sisitimu iyo iyo hombe vatengesi munyika vangazodada nayo. Chinhu chega chakashayikwa nekambani yedu yaive tekinoroji kutungamira traffic… ndipo pandakauya.
Ini ndinofungidzira basa rangu rakafanana nemurume ari kusimudzira mireza muNascar. Ini handisi anenge ane tarenda sekutyaira kwevatyairi, kana varidzi, kana kushamisika sezviri pasi pehood. Asi ndiri kuchengeta ziso rangu pamumhanyi, ndichisimudza mureza weyero kana tiine dambudziko, ndichisimudza iyo tsvuku patinofanira kumira, uye ndichisimudza mureza wecheki patinoita nguva yedu yekupedzisira. Idambudziko risingadaviriki asi ndiri kuputika kwakakomberedzwa neaya mapundutso! Uye mukomana tiri kufamba nekukurumidza!
Mumavhiki apfuura vashanduri vedu vakapedza uye vakaburitsa Call Center Enterprise Kubatanidza iyo yedu Call Center yakadaidza yakanakisa yavasati vamboona. Yaive yangu yekutanga chigadzirwa dhizaini ine Patronpath, saka ndakanyatsonzwa sekunge taida kurova kumhanya kumba. Dare rekuvandudza rakatora zvandaida uye rakavaka huwandu hwezvakasimudzira zvakapfuura zvese kutarisira. Inoshanda isina chaiko uye inotyisa kune kumwe kushandiswa kwakawanda.
Musangano wekugashira waive mumwe wekunakidza kwandati ndamboenda… pakanga pasina mibvunzo uye yakatora maminetsi gumi kureba. Takaratidza Anwendung uye vakaigamuchira. Zvaitwa!
Takaburitsa chirongwa chekushambadzira email cheNational Restaurant Indasitiri mutengi. Ndakapihwa makiyi ekutyaira zvese mameseji uye dhizaini yeemail. Mhedzisiro mhedzisiro mairi maindasitiri B2B akaenzana ekupindura mareti.
Takatorawo yedu backlog yeprojekti nhasi uye tikapedzisa kubviswa kweye yekupedzisira inozivikanwa bug mune yekushandisa. Isu tave kushanda nesimba pakuvandudza, tichigadzira zvirongwa zvekuchinja kwezvivakwa (zvisati zvave kudikanwa) uye nekuvandudza shanduro dzinotevera dzekushandisa (vasati vakumbirwa). Ndiri kuzvipokana kuti ndinyatso tarisa pane zvese zviwanikwa uye nekugadzirisa zvikwata zvakawanda zvatave kutishandira, asi anga ari anoshamisa masvondo manomwe!
Mumwe munhu anondipinza!
Tags: ebayLinkedInkutsvaga kwekutenga kwemunomilokutora milosetup linkedin
Blog Yekuita Zuva 2007 iri Kuuya!
Ndine Verizon PPC 6700 yandaizodai ndakada kuita izvi ku…
Gumiguru 10, 2007 pa 11:54 AM
Makorokoto, Doug. Kuverenga izvo zvakandipa hanzi mapundu!
Gumiguru 10, 2007 na10: 46 PM
Ndatenda Julie! Ini ndakakomborerwa chaizvo nekuwana sangano rakandipa basa, rakandivimba, uye rakandipa simba rekuita shanduko dzandaifunga dzichifanira. Zvinogara zvichishamisa zvinozoitwa nevashandi kana iwe uchivarega!